Ny hevitry ny loko maro samihafa 2 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Ny loko mena:
Tsy » rouge à lévre » io fa « couleur rouge ». Milaza « rà mandriaka »ny loko MENA. Isaia 63:2 – 3 «2 Nahoana no mena ny fitafianao, ary ny akanjonao no tahaka ny an’izay manosihosy ny famiazam-boaloboka? 3 Nanosihosy ny famiazam-boaloboka irery Aho;fa tsy mba nisy niaraka tamiko ny avy tamin’ny firenena na dia iray akory aza; nanitsaka ireny tamin’ny fahatezerako Aho sy nanosihosy azy tamin’ny fahavinirako, dia nipitipitihan’ny ràny ny fitafiako, ka voalotoko ny akanjoko rehetra. »
Nahoana no mena ny fitafianao satria nipitipitihan’ny ràny ny fitafiako, ka voalotoko ny akanjoko rehetra. Raha vao milaza loko mena izany dia rà no hevitr‟izay.
Raha ohatra izany isika mahita hoe soavaly mena aty amin‟ny apokalypsy 6:3 – 4 «3 Ary rehefa novahany ny tombo-kase faharoa, dia reko ny zava-manan’aina faharoa nanao hoe: Avia*. [* Ampio hoe: (ka izahao)] 4 Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka; ary izay nitaingina azy dia navela hanaisotra ny fihavanana amin’ny tany mba hifamonoan’ny olona; ary nomena sabatra lehibe izy. »
Mandriaka ny rà amin‟ny sabatra, ary rehefa maratra ny olona dia rà menamena hatrany no mivoaka ao fa tsy misy rà mavomavo akory. Soavaly mena dia midika hoe fanjakana mihoson-drà.
Ny loko mainty:
FISAONANA no dikan‟ny loko MAINTY.
Isaia 50:3 « Tafiako fahamaintisana ny lanitra, ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. »
Ny loko mainty izany no natafy io lanitra io, ka dia midika fisaonana izany. Raha nilaza isika fa hoe: navadiky ny olona ny zavatra hiainany amin‟izao fotoana izao, ohatra hoe: ilay saina fotsy izay lazainy fa midika fandresena,
dia navadiny ihany koa ny lamba fisaonana amin‟izao fotoana izao, tsy loko mainty intsony no entiny misaona fa lasa loko fotsy indray no entiny misaona. Ankanjo fotsy indray no hanaovany dia asiany bokotra mainty kely eo amin‟ny tratrany. Ao amin‟ny baiboly dia loko mainty no atao hoe fisaonana fa tsy loko hafa.
Jeremia 4:27 – 28 «27 Fa izao no lazain’i Jehovah: Ho lao ny tany rehetra, nefa tsy dia holevoniko avokoa izy. 28 Noho izany dia hisaona ny tany, ary ho tonga mainty ny lanitra ambony, satria efa niteny izany Aho, sady efa nikasa izany ka tsy hanenina na hanatsoaka izany. »
Ny loko hatsatra:
FAHAFATESANA no hevitry ny loko HATSATRA.
Apokalypsy 6:8 « Ary hitako fa, indro, nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran’izay nitaingina ary atao hoe Fahafatesana, ary ny Fiainan-tsi-hita* nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin’ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin’ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibi-dia ety an-tany. [* Gr. Hadesy] »
Izany hoe raha vao milaza loko hatsatra izy izany, dia ny dikany dia hoe fahafatesana.Izany no mahatonga ny olona milaza fa, rehefa misy olona maty an-drano , dia lazainy fa hoe tena hatsatra be mihitsy ilay faty.
Ka ny olona maty no miloko hatsatra. Raha mbola velona ianao, nefa hatsatra dia tandremo rehefa matory ka misanasana ny vava, fa ho lazain‟ny olona ho toy ny efa maty ianao. Mitovitovy manko ny olona matory sy ny olona maty, izany no nahatonga an‟i Jesosy Kristy hilaza manoloana ny fatin‟i Lazarosy, fa tsy maty izy fa matory. Ny olona maty izany dia matory, torimaso lava reny tsy misy farany, dia toy izany raha mijery olona matory isika ao an-trano, dia sady tsy maheno izay manodidina azy izy, no tsy mihetsika, no miraraka rarakivy .